छक्का पन्जा टिमबाट बाहिरिए जितु नेपाल (मुन्द्रे) ? - Reel Mandu
छक्का पन्जा टिमबाट बाहिरिए जितु नेपाल (मुन्द्रे) ?
शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छक्का पन्जा टिमले निर्माण गरेको होलि बिशेष गीत ‘धनिया के होलि’ सार्वजनिक गरियो। सार्वजनिक गीतको भिडियोमा छक्का पन्जा टिमका सबै जसो मुख्य कलाकारहरुलाई देख्न सकिन्छ तर त्यहि टिमका अर्का कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) भने देखिएका छैनन्।
भिडियोमा मात्र हैन गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनको उपस्तिथी थिएन। यसरी दीपक दीपाको प्रोजेक्टमा मुन्द्रे नहुनु र केहि समय अगाडी दीपक दीपासंग सम्बन्ध बिग्रिएको खबर आउनुले जितु नेपाल र छक्का पन्जा टिमबीच सम्बन्ध चिसिएकै हो त ? भन्ने प्रस्न दर्शकहरुको मनमा उठ्न थालेको छ।
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ सिजन एकमा दीपाश्री निरौला अध्यक्षको रुपमा थिइन। दोश्रो सिजनमा भने उनको ठाउमा अभिनेत्री करिश्मा मनान्धारलाई अध्यक्षको रुपमा भित्र्याएपछि दीपा र जितुको सम्बन्धमा खटपट आएको केहि मिडियामा समाचार आएको थियो। तर यी दुईले मिडियासंगको कुराकानीमा एक अर्कासंगको सम्बन्ध नबिग्रिएको बताएपानि सम्बन्ध बिग्रिसकेको स्पष्ट बुझिन्छ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले संचालनमा ल्याएको नया टिभी ‘कान्तिपुर सिनेप्लेक्स’ को शुभारम्भ कार्यक्रममा दीपकराज गिरि र जितु नेपालको बोलचाल समेत भएन। ‘धनिया के होलि’ गीतको भिडियोमा छक्का पन्जा टिमका सबै कलाकार अटाएपनि जितु अटाएनन। यस्तै क्रियाकलापहरुले गर्दा छक्का पन्जा टिम सुस्तरी फुट्दै गएको बुझिन्छ।
यसरी छक्का पन्जा टिमबाट छुट्टिनेमा जितु नेपाल पहिलो व्यक्ति भने पक्कै हैनन्। उनि भन्दा अगाडी यहि टिममा रहेका हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल(धुर्मुस), निर्मल शर्मा(हात्ती) पनि छुटिसकेका छन्। यसरी नै टिममा मतभेद बढ्दै जाने हो भने छक्का पन्जा टिम पनि थियो रे भन्ने दिन नआउलान भन्न सकिन्न ? दर्शकहरुले फुटेको भन्दा पनि जुटेको हेर्न चाहन्छन। के अब यसरी नै टिम छुटिदै जाने हो त ?